Iiran oo bixisay macluumaad dheeri ah oo ku aadan Burburka diyaaradii Ukraine - Bandhiga Media
Dowlada Iiraan ayaa xaqiijisay in laba gantaal ay si qaldan loogu dhuftay diyaarada Ukraine oo bishan ku burburtay magaalada caasimada ah ee Tehraan.
Waaxda badbaadada diyaaradaha rakaabka ayaa qabarkan ku xaqiijisay barteeda Internet-ka.
Baarayaasha ayaa sheegay in laba gantaal oo nooca Tor-M1 ka ay ku dhacday diyaarada waxyar uun markii ay ka duushay madaarka caalamiga ah ee Imaam Khumeyni.
Diyaarada ayaa ku wajahneyd aroornimadii ay burbureysay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kyiv.
Diyaarada oo nooceedu ahaa Boeing 737-800 ayaa waxaa saarnaa 176 ruux oo isugu jiray rakaab iyo shaqaale ayaa cidna ka badbaadin iyadoo falkaan uu ku soo aaday xillixiisada u dhaxeysa Washington iyo Tehran uu gacan kahadal isku Badalay.
Hadalkaan ayaa imaanaya kadib markii Janaraal Camiraali Hajizadeh uu sheegay in mas,uuliyada weerarkan ay qaadanayaan ciidanka kacaanka Iiraan oo uu ka tirsan Yahay.
Burburka diyaarada ayaa ku soo aaday kadib markii dowlada Iiraan ay weerar ku qaaday saldhigyada Milatariga Mareykanka ee ku sugan dalka Ciraaq
Musharixiin ka hor yimid jadwalka Doorashada Madaxweynaha iyo Madaxweyne Kuxigeenka ee Galmudug